Indawo efanelekileyo eCeuta. IFayibha optic 600 - I-Airbnb
Indawo efanelekileyo eCeuta. IFayibha optic 600
Indawo yokuhlala ibekwe kweyona ndawo ikhululekile kwaye intle yokuhlala esixekweni. Yindlu encinci kodwa epholileyo endayidala ukusuka ekuqaleni ngexesha elinzima kakhulu ebomini bam. Inalo lonke uthando lwam kunye nokukhohlisa kwam kuzo zonke iikona. Ndikunqwenelela ixesha elimnandi kunye nolonwabo.
Indawo entle ebekwe kumbindi wesixeko. Inegumbi lokuhlala elinekhitshi elidityanisiweyo, amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela ezimbini, enye yazo ene-suite. Zonke izinto eziyimfuneko zendlu kunye nomhlobiso ofudumele kunye nowamkelayo oya kukwenza uzive usekhaya. Isakhiwo sijikelezwe ziindawo zabahambi ngeenyawo kwaye ngaphakathi kwePlaza de España. Ulwandle imizuzu emi-5 ukuhamba. Uya kuba nayo yonke into oyifunayo phuma nje ngesango.
Uya kuqonda ngokukhawuleza ukuba ubungenakukhetha indawo engcono. Uya kuba nayo yonke into ekufutshane. Zonke iivenkile zempahla, iivenkile zezacholo, iindawo zokutyela, iikhefi kunye neendawo zabahambi ngeenyawo. Ulwandle 5 imizuzu ukusuka endlwini.
Ndiza kukunceda kuyo yonke into oyifunayo. Ifumaneka iiyure ezingama-24 nge-whatsapp. Ndinenkwenkwe eneminyaka emithathu ubudala, ingathatha ixeshana, kodwa incinci kakhulu☺️